Ụbọchị: 10 October 2019
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem-Sen, DHMİ na TCDD General Directorate site na ịdegara ndị ọrụ akwụkwọ ozi rịọrọ ha arịrịọ. Onye isi ụgbọ njem-Onye isi oche Kenan Caliskan kwuru na nkwupụta; “DHMİ na TCDD'den chọrọ metụtara mkpokọta nkwekọrịta tebụl mas [More ...]
Mansur Yavaş, Onye Isi Obodo nke Ankara Obodo ukwu, chọpụtara na ngwa ụmụ-akwụkwọ obodo nwere mmemmem otu otu. Mayor Yavaş na-enye ụmụ akwụkwọ na-amụ ihe n'isi obodo ozi ọma site na mbelata mmiri gaa njem, ụzọ ịgba ígwè na kaadị ndenye aha. [More ...]
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç, bido site na oge ọkọchị nke ọrụ mmezi ụlọ ọhụrụ na-aga n'ihu, ọ sịrị. Onye isi ala Büyükkılıç, Baghdad Street ka emechara ma nyeghaa ọrụ nke enyere ọha na eze kwuru. Obodo Obodo [More ...]
Turkey Railway Machines Corporation (TÜDEMSAŞ) anụ ụlọ ọrụ site mbụ na nke abụọ locomotives onye kpere ekpere maka ndị agha na-agụ Surat al-Fath ke nnukwu n'ihu Booth. The Republic of Turkey State Railways (TCDD) na mmepụta nke locomotives na ibu ugbala [More ...]
Ndị mmadụ abụọ merụrụ ahụ n'ụgbọ 1 na Kütahya ebe ụgbọ okporo ígwè na-ebu ibu kụrụ ọkwa na-agafe. Citizensmụ amaala kọọrọ ihe mberede ahụ merenụ, ndị otu ahụike butere ndị merụrụ ahụ n'ụlọ ọgwụ. Amụtara na ọnọdụ otu onye dị njọ. Njem njem 24274 nke Machinist BC jiri [More ...]
A ga-azụta mmanụ maka ịzụta TÜLOMSAŞ Ọrụ Ndị Ọrụ Ọrụ Ọkụ TCDD Led Lamp Ludet Railway News na Akụkọ Ndị Ọzọ News Nwere Ike Inwe MmasịRayHaber 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Enweghị ndekọ ndekọ dị nro maka 25.01.2019 na sistemụ anyị.RayHaber Mgbatị 04.02.2019 [More ...]
Bursa Gọvanọ Office kwadebeere ọtụtụ akụkọ na-achọ ochie, Turkey mbụ skai eme. A kọwapụtara akụkọ ahụ, nke kwusiri ike banyere usoro Uludağ ọhụụ. Turkey mbụ skai resotu nke Uludag, mara ọkwa Prime Minister Recep Tayyip Erdogan "ka xnumx't [More ...]
Wasgbọ okporo ígwè nke na-eje ozi dị n'etiti Gebze na Haydarpaşa ka a hapụrụ ka ihe ga-adị Köseköy Tupu ụgbọ elu na-agba ọsọ, ụgbọ okporo ígwè, nke agbadatala mgbe ụgbọ elu ahụ na-agba agba, na-eche ọnọdụ na-enweghị isi na Kọnseköy Logistics Center. Ọtụtụ ụgbọ agha karịrị 5 [More ...]
Onye isi oche ụgbọ njem TCDD Kamuran Yazıcı gara nzukọ ọmụmụ ihe gbasara CD TCDD Transportation AŞ 2019 Afọ Fall Term In-Service Training Program gerçekleştiril nke e mere na Kuşadası. N’ikwu okwu n’etiti ndị bịaranụ ebe a, Yazıcı kọwara nkọwapụta iwu njem njem agbaso kemgbe 2003. [More ...]
Otu n'ime ndị mmekọ Kocaeli Metropolitan Municipation, TransportationPark A.Ş. Na-enye ọrụ njem ụgbọ mmiri na Mahadum Gebze Technical University (GTÜ) nwere ahịrị 7 dị iche iche. Usesgbọ elu n'okporo ụzọ dị iche iche nke 7 na-apụ na mpaghara dị iche iche, ụmụ akwụkwọ na-enwe ọ theụ na njem dị mma na mahadum. Transportgbọ njem na [More ...]
Ngalaba cagbọ njem na Njikwa okporo ụzọ Kocaeli, ndị na-ahụ maka ọrụ mkpanaka ụlọ ọrụ malitere imejuwanye ọnụ ọgụgụ ndị na-abawanye na kaadị kaadị njem, ka ebugharị n'ụsọ oké osimiri Karamürsel. Mobile Office Caravan ga-ejere ụmụ amaala ozi ruo Fraịde na Karamürsel. IGBO 1 [More ...]
Obodo Kocaeli na-aga n'ihu na-agba mbọ iji chebe Izmit Bay. N'ọnọdụ a, ịtụle akụkọ sitere na otu ndị na-ahụ maka njikwa gburugburu ebe obibi gbara ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri Izmit Cook Islandd Banda nkụ, dere ntaramahụhụ. AMB MOVR MOV na-agagharị na MARA Kocaeli Metropolitan [More ...]
Obodo Kocaeli na-aga n’ihu na-ebute ngabiga ndị ọhụrụ na nke oge a wee na-arụ ọrụ ahụ. A na-arụpụta nrụpụta na arụ ọrụ ndị ọzọ na akwa Çetin Emeç Overpass Bridge, nke a na-etinye ozu ya n'ọkpụ ụkwụ n'ọnwa gara aga. [More ...]